Yugyan Daily » एसीको असर : स्वास्थ्यमा अनेक समस्या
एसीको असर : स्वास्थ्यमा अनेक समस्या
गर्मीमा कसरी सितलता प्राप्त गर्ने ?
गर्मी बढ्दो छ । गर्मीमा कसरी सितलता प्राप्त गर्ने ? अहिले यसका अनेक विकल्प छन् । तपाईं/हामीले आफ्नो वासस्थान, कार्यथलो आदिलाई वाताअनुकुलित बनाएर बस्न सक्छौं । किनभने कुलर, एसी जस्ता विधुतिय उपकरण अहिले सहज र सर्वत्र उपलब्ध हुन थालेको छ ।
एसी र कूलरबाट निस्कने हावाले शरीरको जोर्नीहरुमा दुखाई उत्पन्न गराउँछ । गर्दन, हात र घुडा दुख्ने हुन्छ । तपाईं लामो समयसम्म एसीको सम्पर्कमा रहनु भयो भने यी दुखाईहरु तपाईको दिर्घकालिन रोग पनि बन्न सक्छ । अर्थराइटिसका रोगीलाई एसीको हावाले नोक्सान पु्¥याउनुको साथै जोर्नीको दुखाई पनि बढाउँछ ।
धेरै समयसम्म एसी अथवा कुलरमा बस्नाले मोटापन पनि बढ्छ । वास्तवमा धेरै चिसो स्थानमा हाम्रो शरीरको उर्जा धेरै खर्च हुँदैन र जसको कारण मोटोपन बढ्न थाल्छ ।
निरन्तर एसीको हावामा बस्नाले मांसपेशीहरु झोलिन थाल्छ । एसीको हावाका कारण टाउको दुख्ने पनि हुन सक्छ ।
धेरै समय एसीमा बस्नाले तपाईंको छाला सुख्खा हुन सक्छ । पसिना नआउनाले रोमछिद्र बन्द हुन्छ र छालामा स–साना दाना र चिलाउने समस्या हुन्छ । त्यसैले अफिसमा एसीमा रहँदा एक–दुई घण्टाको बीचमा मोइश्चराजर लगाइरहनु पर्छ । यसले तपाईंको छाला नरम भैरहन्छ ।